Social Media Kushambadzira kuri Kukundikana | Martech Zone
Social Media Kushambadzira kuri Kukundikana
China, Kurume 24, 2011 Chipiri, Mbudzi 29, 2011 Douglas Karr
Gore rakapera, ndakanyora posvo ndichipindura Jonathan Salem Baskin, achitora kunze kwekufunga kwake kuti Social Media inogona kuva ngozi kumakambani. (Ini chaizvo ndakabvumirana naye pane zvakawanda zvinoverengeka).
Ino nguva - mumaonero angu - VaBaskin vakairovera. Yese kambani yave iri kusvetuka pasocial media bandwagon, kuwedzera kushambadzira kushandisa mune iyo nhandare, asi vashoma vari kuona kudzoka kwavaitarisira.
Burger King akatsva kuburikidza nemaCMO akati wandei uye akadzinga agency Crispin Porter & Bogusky mushure mekuburitsa macampaign epaFacebook nemavhidhiyo ehutachiona ayo akanyanya kutariswa apo bhizinesi rakapupurira makota matanhatu akateedzana ekuderera kwekutengesa. kuburikidza AdAge
Pamisangano uye nevamwe vandaishanda navo, ndakavadenha pazviitiko zvakawanda kuti vandipe humbowo husingarambiki hwekuti nhepfenyuro enhau dzinogona kunyatsogadzirwa, kurongwa nekuitwa ne inotarisirwa dzoka pakuisa mari. Kiyi pano ndeiyi inotarisirwa… Ndinogona kuseta zvinotarisirwa kubva kuemail, kubhadhara pakuki yega yega uye nekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga kwekufamba kwenguva… asi kwete zvemagariro. Hatina kufumura mashiripiti algorithm kuti tibate mune yemagariro psychy parizvino.
Hakusi kuti handitendi kuti kuriko ukoshi mumagariro enhau… ndinodaro. Asi ini ndinofunga pane zvinhu zviviri zvakakosha zvekumisikidza midhiya enhau zvinobudirira
Iyo kambani inoda kuwedzera huwandu hwemagariro inofanira kunge yatove yemagariro! Kukoka munhu wese kuhurukuro uye osapindura, kuvanda, kana kuyedza kutenderera mhinduro kunogona kukuvadza kupfuura kunaka. Vazhinji, kana vasiri vese, yemakundano enhau anobudirira ayo nyanzvi dzinonyora nezvazvo ndezvemakambani akange atove enharaunda… masvikiro asati arova.
Iyo kambani inoda kuwedzera huwandu hwemagariro inofanirwa kuve neanoshanda ekushambadzira online yatove panzvimbo. Ndokunge, ivo vanofanirwa kuve nemasaiti akakura, mablogiki akasimba, akakwirira ekushandura mapeji ekumhara, hukuru hwekutsvaga enjini uye neanoshanda ekurera eemail zano.
Kana iwe uri kuyedza shandisa midhiya yemagariro usati washandisa zvinobudirira, semuenzaniso, chirongwa chekurera kuti uvhare zvinotungamira zvawakatokudziridza hukama uye vari kunyoreswa kwauri… unongova nzungu. Zviri nyore kwazvo kuvhara bhizinesi kubva pahukama hwakagadzwa pane kukanda chishandiso, chinodhura kunyorera kumusoro paFacebook uye kutarisira mhinduro iri nani uye kudzoka mukudyara! (Dueling huku haina kubatsira kutengesa burger.)
Ndinotenda izvozvo pasocial media ndeyekuwedzera. Kana iwe uchida kukwidziridza meseji - iwe unofanirwa kutanga uine meseji inoenderana, vateereri kuti vagoigovera kwairi, uye nzvimbo yekuti vateereri vauye. Tora zvese zvako zvekumaka, inbound kushambadzira, yekutsvaga injini optimization, uye kunyangwe yemakambani kublogi munzvimbo usati watanga kukanda mari pane yakawedzerwa social media chirongwa!
Handitende kuti vezvenhau ndizvo akafa sedanho rekushambadzira… Ini ndinongofunga kuti zvakagara zvichitungamirirwa zvisizvo senzvimbo yezano parisingafanire kuve.
Tags: jonathan salem baskinevanhu vezvenhauSocial Media Marketing
Disqus: Kutonga Mutambi weKupindura Masystem
Tekinoroji Inopisa Kukura Kwehupfumi muIndiana
Mar 24, 2011 pa 5: 11 PM
Douglas, ini handina kukwanisa kubvumirana zvakanyanya nekuongorora kwako kwakadzama. "Meseji yacho ndiyo (ichiri) meseji" zvisinei nepakati, handiti?
Mar 24, 2011 pa 5: 19 PM
Zvimwe, Jonathan… Ini ndinofunga svikiro rega rine chinangwa rakabatana navo uye rinoda kuti meseji igadziriswe kunongedza iye anogamuchira. Semuenzaniso, kutsvaga kwekuti 'tenga zvakare kugadzirwa iPad' kunofanirwa kumhara uko munhu wacho anogona kubva atenga ... asi meseji yeFacebook Ad inogona kunge iri 'iPads inogadzirwa newarandi'. Chinangwa chekutsvaga ndechekutenga, chinangwa cheiyo Ad ndechekushongedza kumwe kutarisirwa kusingatarisirwe.
Chinyorwa chikuru! Ndanga ndakamirira mumwe munhu ane pulpit anodheerera kuti atange kutora kumwe kuchinjika kune vese majee kunze uko vachitengesa 'kubatikana'. 🙂 Zvinoita sekunge urovha hwakwira, isu takaguta nevanopa mazano. Uye pavanokundikana sevanachipangamazano vekutengesa, isu takapa ichi chinhu chitsva chinonzi 'social media consultant'.
Mar 24, 2011 pa 8: 26 PM
Ndanga ndichitsvaga iro izwi… gudzazwi. Izvo zvipikiri. Zvemagariro midhijeti mabhajeti haafanire kupfuudza uye panofanirwa kuve nezvinangwa zvine chinangwa, asi kuverenga kweRI kunokatyamadza zvakanyanya. Ini handifunge nezvemagariro enhau senzvimbo yekutengesa uye makambani anoyedza anoedza kuwana mashoma kudzoka uye kuita kushoma. Makambani anopinda munzvimbo yavo achiziva musika wavo uye vachitaura nezvenyaya dzemisika yavo uye nekuwana "hutungamiriri hunofungidzirwa" nezvimwe… kukudziridza ruzivo rwechiratidzo runonzwisisika kuti dzimwe nguva runogona kubvisirwa kutengesa asi zvinopfuura kungovabata panguva yesarudzo.
Muenzaniso ungave makambani eshangu kana iwe ukatevera Toms shangu pa Twitter uye zvakare Nike shangu iwe unogona kuona Nike kutumira nezve Air Jordan inodzoka shangu ye $ 100 chete peya uye iwe unogona zvakare kuona Toms Shoes kutumira nezve musiyano uripo shangu dzinogona kugadzira muhupenyu hwevacheche uye nemabatiro avari kuita nechinangwa chekuisa shangu pamakumbo maviri epasi. Paunoenda kuchitoro cheshangu uye unoona Toms Shoes padhuze neAir Jordan kudzoka hurukuro ipi ingangouya mupfungwa? Mari yangu iri panhaurirano inoita senge isina chekuzvipira pamusoro pekuti iwe ungabatsire sei kuwana zvimwe zvido zvekutanga zvichaita kuti ugare uchifungisisa kupfuura nhaurirano ingangoita madhora zana ichikuita kuti unzwe kunge wechidiki zvakare.
Ingori yangu 2 ¢
Mar 25, 2011 pa 10: 31 AM
Yakanyatsotsanangurwa Douglas, uye kurudyi pane mucherechedzo wemakambani mazhinji.
Chidimbu chako chinotsanangura zvinoshamisa kudikanwa kwekubatanidzwa kwemafemu kushambadzira zviitiko munzvimbo dzinoverengeka. Zve internet kunyanya, ini ndinonyatsoda iyo inogona otomatiki kushambadzira masystem senge Hubspot kupa, sezvavanobata pane ese mapoinzi awataura.
Mar 25, 2011 pa 11: 27 AM
Izvo zvakare zvakakosha kuti ubatanidze vateereri pane imwe nhanho yemunhu, izvo zvingave zvakaoma kumakambani makuru kuti aite. Iwe unogadzira sei hukama nemamirioni evangangodaro vatengi? Unozvisungirira sei kune chako chigadzirwa pane vako vanokwikwidza, kana icho chete chinhu chinokusiyanisa iwe kubva kune mumwe nemumwe mutengo? Hunhu, uye hukama. Makambani makuru anogona kunge "apfuura" kana "pamusoro" pasocial media kunze kwekushandisa yavo yemagariro network pasarudzo, uye kuburitsa yakasarudzika mari yekuchengetedza. Yangu chete .02
Mar 25, 2011 pa 6: 24 PM
Anodiwa Mr. Karr,
Izvi zvinotaurwa kubva kune mumwe munhu akaita mangani magariro ekushambadzira? Ndine mubvunzo. Ini handisi kuzokurumbidza nekusvetukira pane inopesana nevezvenhau bandwagon. Yako ese co-horts anogona kuwana chero chirevo mune izvi ivo ivo asi ini ndinofunga urikuita zvinoitwa nevanhu vazhinji uye uchiona zvaunoda kuona. Ipo hongu midhiya enhau inokonzeresa yakaipa yekudhinda: http://bit.ly/bad-press - iko kungori kushanda kwechishandiso kukuchengetedza iwe kutendeseka.
Ehe, kuve nechokwadi chekuti pasocial media chishandiso chine simba kupfuura chinogona kudzosera kumashure. Uye hongu, iwe wakarongedza zvakakwana nzvimbo dzekuzvidzivirira kuti urege kuzvipira zvizere kune yako poindi. Asi chirevo chegumbeze ichi hachisi chinhu kunze kwekuvhunduka moto.
Leveraging avo social graph ichiri munzira dzese nyowani kune vashambadzi uye vechinyakare vashambadzi. Ivo vanonzwisisa PUSH, BIG, IZVOZVO, SALE, YEMAHARA, DZIDZO! Uye hazvisi "kungoita hurukuro" kunzwisisana nenharaunda, kutora chikamu uye yechisikirwo brand brand kusimudzira kuburikidza nekuenderana kwemeseji.
Ndinobvuma kuti pane zvakakundikana. Asi zvirokwazvo ikozvino zvakanyanya kana kushomeka kunoendeswa kune echinyakare masvikiro. Ah uye BTW, ndeye "Subservient Chicken" isiri yekuchera huku uye kana iwe uchiri kutaura nezvazvo - kupfuura zvayakashanda.
Mar 25, 2011 pa 6: 54 PM
Parizvino, vese vatengi vedu vane hukama hwevanhu sechikamu chehurongwa hwavo hwese. Zvakare, icho chakakosha chikamu cheangu epamhepo kushambadzira zano zvakare. Ini handisi 'kusvetuka pane bandwagon'. Vatengesi vane tarenda vanofanirwa kuwana mhedzisiro kune vatengi vavo hava 'svetuke'. Isu tinoona maitiro ekunyatso shandisa svikiro pane kusiya maitiro ekushanda nekuti Wired kana Inc inonongedzera kune 'inotevera hombe chinhu'.
Uye Subservient Chicken yaive epic kukundikana - muenzaniso wakanaka wekushambadzira kwakashata. Kukwezva nhamba hombe dzevateereri vasina basa hachisi icho icho mushambadzi anofanira kuve shure.
Mar 25, 2011 pa 7: 51 PM
Iyi mhinduro inoshanda, asi haisi kuratidza mune rako gwaro rekutanga. Uye ini zvakare ndinobvumirana neyako ongororo yekuti isu tinoshandisa zviyero (s). Kenneth Cole, Groupon, Red Cross, Ford uye nemhando dzose dzakabudirira dzakambopinda munzanga dzinofanirwa kusangana nedambudziko nekukurumidza kupfuura nakare kose muRT. Asi uri kutaura chokwadi hapana "mashiripiti algorithm" uye hakuchazombove nenzira yekufanosarudza iyo chero yakapihwa demo maitiro kune yakasanganiswa mushandirapamwe uye tariro yekuvabvisa pakashata kupfuura (sezvazvaive) nevezvenhau vezvenhau.
Saka 'nei kushambadzira munharaunda kuchikundikana'?
Mamirioni gumi nemashanu anorova mazuva mashanu ekutanga
7,000,000 nhepfenyuro yekuratidzira
450 mamirioni anorova
Murume ndinoshuva kuti dai ndaigona kuita zvisina kunaka sezvazvakaita. Playa anovenga!
Mar 25, 2011 pa 8: 22 PM
Kana zvimiro zvichikwanisa kubhadhara mabhiri ako, ndinofungidzira izvo zvakanaka! Kuna Burger King, iyo yanga isiri iyo nyaya - ndosaka mushandirapamwe wakasiiwa uye agency yakadzingwa.
Mar 29, 2011 pa 1: 38 AM
Kana kushambadzira mumagariro kuri kukundikana iwe kana kusiri kunyatso kukubatsira iwe, saka zvirinani tsvaga chimwe chinhu chinotsiva pasocial media. Tarisa otomatiki masisitimu anogona kukubatsira kunze mune yako nzira yekutengesa, Kungofanana nezvandakawana mune advancedwebads. sevhisi inopa risingaperi mabhana mabhenefiti uye kudzvanya.